Efere Laser tingcha Machine
Tube Laser tingcha Machine
Efere Ma tube Laser tingcha Machine
Tube Automatic Nri Laser tingcha Machine
Hand-ẹkenịmde Laser ịgbado ọkụ Machine
Laser Nkedo Ndina
Laser Nkedo Aluminium Doo
Ise Mere Jiri Nkenke Laser tingcha Machine
site ha na 21-05-13
Laser ọnwụ bụ a na-abụghị kọntaktị ụdị, dabere na a kwes n'ichepụta usoro na-agwakọta lekwasịrị anya okpomọkụ na kwes ike, na-emetụta mgbali gbazee na ịgba ihe na warara ụzọ ma ọ bụ mbepụ. Tụnyere ọdịnala ọnwụ ụzọ, laser ọnwụ nwere ọtụtụ uru. Nnukwu focu ...
Kedu otu esi ahọrọ ikike igwe akuku laser ziri ezi?
Na ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị, anyị na-akpọkarị paịpụ igwe n'otu n'otu dị ka paịpụ ígwè, mana n'ọhịa nke ịkpụ ọkpọkọ, anyị ga-amata ọdịiche dị ma ọ bụ igwe ahụ bụ ọkpọkọ carbon steel, pipe silikon steel, pipe steel pipe, titanium alloy pipe or aluminum alloy pipe . N'ihi na ihe dị iche iche dị iche iche ...
Gịnị bụ nkịtị mmejọ na usoro ọgwụgwọ nke laser ọnwụ igwe?
site ha na 21-04-30
Mgbe ị na-eji igwe ịkụcha laser, nsogbu na-ebilite n'ihi oge iji oge na-aga n'ihu, ebe ọrụ uzuzu uzuzu na àgwà dị ala nke ndị ọrụ. Kedu ihe m kwesịrị ịme ma ọ bụrụ na enwere nsogbu ụfọdụ? Nke mbu, enweghi mmemme maka mmalite mmalite: Ajọ arụmọrụ: isi ike s ...
Obi ụtọ na nkwado na ntụgharị expo China 2021
Na Eprel 22, IE expo China 2021 agwụla na Shanghai, China. Anyị emeela ezi mmekọrịta mmekọrịta na ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile na ngosi. Anyị egosipụtala ụfọdụ ngwaahịa na Ngosipụta, dị ka igwe mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ laser, igwe ịkụcha laser, efere ...
N'ụzọ ndị dị a canaa ka a ga-esi jiri igwe ọrụ laser laser taa?
site ha na 21-04-13
Laser ọnwụ bụ dochie omenala n'ibu mma na-adịghị ahụ anya doo. O nwere njirimara nke oke nkenke, ọsọ ọsọ ọsọ, na-ejedebeghị na ịcha usoro, ụdị akpaaka, ịchekwa ihe, ịcha mma, na ụgwọ ọrụ dị ala. Ọ ga - eji nwayọ nwayọ ga ...
The ojiji nke eriri Laser ibercha Machine Equipment on Industrial Materials
Site na mmepe ngwa ngwa nke sayensị na teknụzụ, igwe eji egbutu eriri laser aghọwo nke a na-eji n'ọtụtụ ebe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Igwe ejiji laser nwere oke oke oke na ọsọ ọsọ, nke nwere ike melite arụmọrụ ọrụ site na 60% ma chekwaa ụgwọ ndị ọzọ. Ya mere, ha ...
Etu ị ga-esi nweta ọtụtụ akụrụngwa Laser gị
site ha na 21-04-03
Ngwongwo laser nke ígwè na-agụnye akụrụngwa dị elu nke chọrọ ndozi oge niile iji hụ na arụmọrụ dị elu. Ka emechara, laser ọnwụ bụ ihe niile banyere nkenke, otú idebe gị igwe na ọnụ ọgụgụ kasị elu dị oké mkpa iji na-arụpụta gị ma ọ bụ gị na ndị ahịa na-atụ anya. Enweghị ikike mmezi pla ...
Cha àgwà nke eriri laser na ígwè laser ọnwụ igwe
site ha na 21-03-14
Site na iji ihe eji eji igwe eji eji igwe eji eme ihe, a na-emezi teknụzụ nke ụlọ ọrụ laser mgbe niile ma gbanwee, nke na-enye nkasi obi maka nhazi na mmepụta, na-azọpụta ego ọrụ, ma na-emeziwanye arụmọrụ na ego ...
Igwe ihe nkenke laser nke ụlọ ụlọ, olee maka ogo ya?
ma ọ bụrụ na ị na-achọ igwe ihe igwe na-egbu egbu Ọtụtụ ndị ahịa tupu ha ahọrọ igwe ọkụ laser ga-eche maka mmetụta nke ngwa ngwa ahụ, ya bụ, nha aha mmadụ na mpụga, mgbe ahụ ogo nke ụdị ọnwụ laser bụ Wei Qian, sudde ...
Olee debug na mma na-agba na mmetụta nke laser ọnwụ igwe?
Akụrụngwa akụrụngwa laser karịa, akụkụ ụfọdụ nke oge mmezi dị mkpụmkpụ, igwe ịchacha laser na-ejikarị. Olee otú debug metal laser ọnwụ igwe? Kedu otu esi emefu iji mee ka o belata ngwa ngwa ma ka mma? Ọ dị mkpa ka ị na-ejigidekarị, iji mee ka ihe dị mma ...
Nzube na-arụ ọrụ nke eriri laser ịkụcha igwe
A na-eme nhazi laser nke igwe laser ịkụcha eriri site na eserese kọmputa, nke dị mfe ma dị mfe iji rụọ ọrụ. Na usoro nke eserese nhazi, ọ nwere ike mezue nhazi mgbanwe nke eserese ọ bụla. Na ike na-aghọta nnukwu-ọnụ ọgụgụ, elu-arụmọrụ, h ...
Iji igwe iku ahihia eme ihe na igbutu ihe eji acho
Enwere ike itinye igwe mpempe akwụkwọ fiber laser iji belata ọtụtụ ihe. Ọ bụ mpaghara kpuru ìsì mgbe ọ bụla na-egbutu ihe ọla. Ọ gbanwere n'afọ ndị na-adịbeghị anya. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ na-eji nwayọọ nwayọọ kwalite na ntinye nke ọla kọpa ...
Mpaghara A, ọgụgụ isi Manufacturing Industrial Park, Binhu Okporo ụzọ, High-tech Mpaghara, Pizhou, Jiangsu Province